ROOBLE oo Dhuusamareeb kula kulmay Saraakiil ciidan iyo arrimaha uu kala hadlay | Arrimaha Bulshada
Home News ROOBLE oo Dhuusamareeb kula kulmay Saraakiil ciidan iyo arrimaha uu kala hadlay
ROOBLE oo Dhuusamareeb kula kulmay Saraakiil ciidan iyo arrimaha uu kala hadlay
Wednesday, November 17, 2021 News Edit
Bulsha:- Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug ayaa maanta kulan la qaatay Taliyaha guutada 5-aad qeybta 27-aad ee ciidanka xooga dalka, Korneyl Maxamuud Xasan Ibraahim Baakay.
Sidoo kale waxaa kulankaan qeyb ka ahaa Taliye Xuseen Axmed oo kamid ah Saraakiisha guutada 5-aad, waxaana looga wada-hadlay arrimaha amniga iyo howl-gallada ka dhanka ah kooxda argagixisada ee Al-Shabaab.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa saraakiishan ku bogaadiyey howl-galada ay ka wadaan deegaanada maamulka Galmudug, ayada oo lagu soo hadal qaaday howl-galkii Guriceel looga saaray dhaq-dhaqaaqa Ahlu-Sunna ee dagaalka la galay maamulkaas.
Saraakiisha ayaa u ballan-qaaday Ra’iisul Wasaaraha inay dardar-gelin doonaan howl-galada dib u xoreynta ee ka dhanka ah argagixisada, iyagoona ra’iisul wasaaraha ugu mahad-celiyay dhiirigelinta uu u sameeyay.
Ra’iisul Wasaaraha oo maalmihii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb ayaa hore kulamo kala duwan la yeeshay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka Galmudug oo uu kala hadlay xoojinta kaalintooda nabadgelyada, dib u heshiisiinta iyo doorashada.